UZhejiang Leiyu Intelligent Hardware Technology Co, Ltd. yasungulwa ngo2006, Itholakala ku-8 Lemon Road, Ouhai Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang China.Leiyu isizinda sokukhiqiza eTaishun okungumenzi wokukhiya onguchwepheshe, isitshalo sokukhiqiza sihlanganisa indawo ecishe ibe Isikwele esingu-12,249 Amamitha, abasebenzi abangaba ngu-150.Umkhiqizo oyinhloko kufaka phakathi ukukhiya okuhlakaniphile, ukukhiya okwenziwe ngomshini, izesekeli zezinsimbi zomnyango kanye newindi.Leiyu inobudlelwano besikhathi eside bokusebenzisana nabahlinzeki bezinkampani ezidumile zezindlu ezifana neVanke neHaier Real Estate, futhi ibiyi ikhwalithi esezingeni eliphakeme esekela umphakeli weVanke neHaier Real Estate, onikezwa ngonyaka 500,000 amasethi wezinto zokukhiya.Leiyu ngokuzimela yathuthukisa imikhiqizo yochungechunge lwe-smart lock yokuqala "evuleke ngesandla" ngo-2018 yathola nenqwaba yamalungelo obunikazi kazwelonke afakelwa isicelo sehhovisi nasekhaya. Ukuhlaliswa komthethosivivinywa, ukuxazululwa kwehhotela / indawo yokuhlala / ukuhlala ekhaya kanye nezinkinga eziningi zokuphathwa kwempilo, futhi kunikeza isisombululo esenziwe ngokwezifiso ngendlu eqashisayo, ifulethi eliqashisayo, ukuphathwa kwamahhotela, ihhovisi lenkampani.
Ngo-2008, uLeiyu wenza intuthuko kwezobuchwepheshe ekukhiqizeni izinto ze-aluminium oxide, futhi wakha i-aluminium alloy entsha enempilo futhi enobungani emvelweni esebenza kahle kakhulu ebizwa nge-Apple aluminium
Selokhu kwasungulwa i-LEI-U, u-Lei Yu ugcizelele ukubekwa phambili kwekhwalithi yomkhiqizo, futhi uthole amalungelo angaphezu kwayi-80 empahla yengqondo, izitifiketi ezingaphezu kwama-50 zamaShayina nezangaphandle, kanye namalungelo obunikazi ayisishiyagalombili. Imikhiqizo eyinhloko idlulise isitifiketi se-American BHMA sokukhiya nge-elekthronikhi, isitifiketi sokuphepha komlilo saseMelika, kanye nesitifiketi se-elektrikhi sokukhiya se-European CE.
UKUZALWA KOKUQALA KOKUQALA OKUKHULULEKILE ---- LEI-U
Ngo-2019 i-LEI-U uhlobo olusha lokuzalwa komnyango okhaliphile we-LVD-05 ozelwe.Kunamalungelo obunikazi ama-4 ayisisekelo futhi angasetshenziswa ngolimi oluningi emhlabeni jikelele.Le lokhi ehlakaniphile ingasetshenziselwa amakhaya azimele, ihhovisi lezentengiso, izakhiwo zokuhlala nokunye.
I-LVD-05 Shintsha ukucabanga kwabantu ngamalokhi wendabuko ahlakaniphile
I-LVD-06 SMART LOCK 2.0
NgoMeyi ka-2020, kushicilelwe inguqulo ye-LVD-06 2.0, sebenzisana nohlelo lokusebenza lokhiye lwe-Tuya oluhlakaniphile nolwe-TT ukwenza impilo entsha ehlakaniphile. Inhloso yethu ukusiza ukwenza impilo ibe lula futhi iphephe kakhulu.
Njengamanje, ukukhiya okuhlakaniphile kwe-LEI-U kuthunyelwa emazweni angaphezu kwama-20 aphesheya kwezilwandle, eNyakatho Melika, e-South Asia, e-Southeast Asia, e-Europe, e-Central America nakwezinye izifunda. namakhasimende ezinto zokwakha zendawo, imakethe enkulu nezinye izinhlobo zamakhasimende.
Ekhaya le-LEI-U, sikholelwa ukuthi umnyango wekhaya awugcini nje ngokugcina ikhaya lakho liphephile kubavakashi abangafuneki. Kuphathelene nokuvumela abantu abafanele bangene - ngezikhathi ezifanele.